BPS/Degmada9aad - 12aad
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-2:30pm
Lambarka Taleefanka 617-635-8865
Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Dugsigaani waa mid lagu galo diiwaangalin cidkasta ufuran Dhagsii Batoonka Apply Online si aad uhubiso in diiwaangalin furantahay.
ACC waa dugsi sare oo gaar u ah udiyaarinta ardayda kuleejka ee leh hamiga sare oo doonaaya inay ku biiraan kuleejyada ama jaamacadaha afarta sano ah. Waxaan nahay dugsi tijaabo ah lagu barto oo yar oo leh waxbarasho tayo leh iyo shaqaale tayo iyo daryeel leh kuwaasoo si buuxda utaageera ardayda siiyana caawimaada shaqsiga ah ee ay ubaahan yihiin una qalmaan. Dhamaan ardaydeena waxay ka qaybgalaan nashaadadka loogu diyaar garoobaayo kuleejka waxayna talobixin asbuucle ah kahelaan lataliyahooda tilmaamn bixinta.
Imisa arday ayaa qalin jabisay?